Iindaba -Ishishini laseHangzhou Jiande ngokungxamisekileyo libuyise abasebenzi abangaphezulu kwe-100
Ishishini laseHangzhou Jiande ngokungxamisekileyo libuyise umva abasebenzi abangaphezulu kwe-100
I-Hangzhou Jiande Enterprise ngokungxamisekileyo ibuyise abasebenzi abangaphezulu kwe-100, baphinda-phinda kathathu umvuzo wabo ukukhuthaza ixesha elongezelelweyo ukwenza iimaski!
Ngokuqhambuka kwenyumoniya entsha ye-coronavirus eWuhan, ukuveliswa kweemaski kuye kwaba yinto exhalabisa uluntu.
Njengeshishini eliphambili kwi-R & D kunye nakwimveliso yezixhobo zokuphefumla ezinesabelo sentengiso sasekhaya sama-35%, iJiande Chaomei Daily Chemical Co, Ltd. yasabela ngokukhawuleza kwimfuno yentengiso ekhulayo evela kubhubhane we-coronavirus pneumonia kwaye yabiza abasebenzi ngokukhawuleza kumzi-mveliso ukulungiselela ngexesha loNyaka oMtsha waseTshayina, kuphela isiqingatha sosuku lucinyiwe ngo-Eva wonyaka omtsha, kwaye lonke ixesha liqinisekiswe ngokupheleleyo ngemveliso.
Ekuqaleni, ngaphezulu kwe-120 labasebenzi ababebuyile ekhaya bevela eholideyini nge-18 kaJanuwari, emva kokufumana isaziso sexesha elongezelelekileyo, babekela bucala umsebenzi wabo ekhaya, babuyela kwangoko kwizithuba zabo, kwaye bazinikezela emsebenzini wokuqinisekisa ukubonelelwa kweemaski.
Indawo yokusebenzela ibishushu, kwaye abasebenzi bebehleli edesikeni yokusebenza besoyikisela ukwenza iimaski. Emva kokuba abasebenzi begqibile ukuwelda imaski yokukhusela, umntu othile wakhupha imaski kwangoko.
“Namhlanje, inani lilonke leeodolo kumzi-mveliso liye lafikelela ngaphezulu kwezigidi ezingama-80, kwaye ulungiselelo lwezinto lurhoxisiwe. Ngomvuzo ophindwe kathathu, siya kubiza bonke abasebenzi abakufutshane ekunokuqhagamshelwana nabo kwaye sizame konke okusemandleni ukuwugqiba. Ii-odolo, ixabiso langaphambili lomzi-mveliso weemaski lihleli linjalo. ” U-Lin Yanfeng, umphathi jikelele we-Party yesebe lase-North Korea kunye ne-United States iimaski kwisiXeko i-Jiande, uthe siyunithi yesizwe yongxamiseko, kwaye iimfuno zelizwe mazibe zezokuqala.
I-Chaomei Inkampani yakha yenza imisebenzi ebalulekileyo kwilizwe ngeli xesha le-SARS, inikezela ngemaski engqina ubungqina be-SARS kwisibhedlele i-Beijing Xiaotangshan, iDitan Hospital, iSibhedlele seZifo eziSulelayo sase-Beijing, iSebe loPhuhliso loButho loMkhosi wase-China kunye neZiko loGcino-mpahla loNgxamiseko.
Ngokweengxelo, kulindeleke ukuba ukusukela nge-22 kaJanuwari ukuya kumhla wesine woNyaka oMtsha, inkampani iqinisekisa ukuveliswa kwemaski ezingama-30,000, imveliso yeentsuku ezingama-50 000 ukusukela kusuku lwesine ukuya kumhla wesibhozo, kunye nemveliso engaphezulu kwe-100,000 yemihla ngemihla emva usuku lwesibhozo.